Hiran State - News: Imaam Mohamud Imaam Cuamr oo ku geeriyooday Kenya
Imaam Mohamud Imaam Cuamr oo ku geeriyooday Kenya
Alaha u naxariistee waxaa galinkii dambe ee maaanta ayaa waxaa magalada Nairobi ku geeriyooday Imaam maxamud imaam cumar oo mudooyinkii ugu dambeysay ku xanuunsanayay halkaasi.
Geerida imaamka ayaa si aad ah looga dareemayaa magalada Nairobi iyo guud ahaan dalka Somaliya iyadoo ay buux dhaafiyeen goobta uu ku geeriyooday dad aad u tira badan oo ay ka mid yihiinUgaasyo, siyaasiyiin, culumaa udiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada Somaliyeed.
Imaamka ayaaa todobaadyo ka hor loola soo cararay isbitalka Nairobi kadib markii uu soo wajahay xanuun, mudadaasi wixii ka dambeyay ayaa lagu dabiibayay Nairobi hosbital.
Imaam Maxamuud Imaam Cumar ayaa ka mid ahaa duubab dhaqameedyada caanka ka ahaa dalka Soomaaliya, sida weyna looga qadarin jiray, waxaa uu horay uga qeyb qaatay dadaalo nabadeed iyo xalinta khilaafaadka colaadihii dhex mari jiray Beelaha Soomaaliyed.Maanta galinkii dambe ayuuna ku geeriyooday magalada Nairobi ee dalka kenya Alla naxariistii jana haka waraabiyee.
Bahda Hiranstate.com waxey tacsi u direysaa qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyooda Imaamka, sidoo kale Ugaasyada, aqoonyahanada, culimada, dhaliyarada iyo dumarka reer Hiiraan waxey aad uga xunyahiin geeridii naxdinta laheyd ee ku timid Imaam beesh a Mudulood iyagoo ilaah uga baryaye danbi dhaaf.
· admin on May 12 2011 20:11:07 · 0 Comments · 1776 Reads ·
14,584,753 unique visits